Tsy diso anjara tamin’izany ny Fikambanana mozilimana Ahmadiyya eto Madagasikara, tarihin’ny misionera miasa an-tsitrapo Atoa Ahmed Mudassir. Fizarana fanomezana ho an’ireo olona sahirana miisa 380 monina etsy Andavamamba Anatihazo II omaly no nentin’izy ireo nanamarihana ny hetsika ka nanamafisan’ity tompon’andraikitra ity fa ny finoana silamo dia fivavahana feno fiadanana sy fandriampahalemana fa tsy araka ny fiheveran’ny sasany azy ho fampihorohoana. Mifanohitra tanteraka ny fivavahana silamo sy ny terivozina na ilay fampihorohoroana, hoy izy. Nomarihiny fa miezaka ny manatanteraka ny hafatr’ilay Andriananahary izy ireo sady miezaka mampianatra ny mpiara-belona mba hizara tsy misy fanavahana ihany koa. Notsiahiviny fa raha iray volana ireo mpino silamo no tsy nihinana dia tsapan’izy ireo fa mafy ny mahazo ireo sahirana izay misy zara raha mihinana mandritra ny 12 volana.